Ukususela kwiJedi Master ukuya ePadawan, kukho ulawulo oluqinileyo lweJedi
I-Jedi yiinkwenkwezi eziqingqiweyo kwiifilimu ze " Star Wars ", ezijongene nokukhusela i-galaxy kwimikhosi yoBumnyama ngokusebenzisa amandla angamazwi awaziwayo njengeGunya. Okokuqala sifunda ngoJedi kwindawo yokuqala (ngokwemihla yokukhululwa, angayilanga kwi-movie), "Ithemba elitsha." U-Obi-wan Kenobi uqala uLuka Skywalker kwiMbutho aze amxelele i-Jedi yengqungquthela yinyani (kwaye i-Obi-wan iyenzeka enye, nangona ifihlakele).
Umyalelo weJedi unezigaba ezine ezisisiseko: Ulutsha, iPadawan, Knight, kunye neJedi Master. Nangona amagama kunye neenkcukacha ezithile zihluke kuyo yonke imbali yeJedi , ukuqhubela phambili okuvela kumqeqeshi ukuya ku Knight ukuya kwi-Master kuyafana.
I-Handout / Getty Izithombe
Umntwana osemncinci okanye u-Jedi uqalise umntwana okhuselekileyo ophakamileyo ophakanyisiwe kwi-Jedi Temple ofumana umyalelo osisiseko kuMbutho. Ekubeni i-Force iyinxalenye yeemethysicalism, idinga ukucamngca. Ukufunda indlela yokusebenzisa i-Force iqalisa kusebuntwaneni. I-Jedi abantwana abaselula baya kwi-Itum, apho bafumana khona iikristbhu ezifunekayo zokwakha izibane zazo.
Abantwana abaselula abadlulileyo kwiimvavanyo zokuQala baqhubeka noqeqesho lwabo njengePadawans.
Isikhundla se-Youngling sasihlala kuphela ukusuka kwi- BBY ukuya kwi-19 BBY malunga ne-1000. Umkhwa wokuthatha abantwana abanomdla njengabantwana babenjongo yokugcina iJedi kude nezikhonkco, eziya kubavimbela ukuba bangawa phantsi koMnyama .
UFrazer Harrison / Getty Izithombe
I-Padawan okanye iJedi Apprentice nguJedi oselula ekuqeqesheni ngeJedi Knight okanye Master. Kwii-eras apho i-Youngling isikhundla engekho khona, abaqeqeshi beJedi baqala kwisikhundla se-Apprentice.
Xa umyalelo weJedi wawuphakathi, phakathi kwe-4,000 ye-BBY kunye ne-BBY ye-19, ubuhlobo be-Master / Padawan bubekwe kwaye lukhokelo oluqinileyo. Ngaphambi nangemva, inkqubo yokuqeqesha iJedi yayingabalulekanga; IJedi Knights kunye noMasters babenomkhethe omkhulu kulowo baza kuqeqesha baza bavakalisa abafundi babo beK Knights xa bekulungele.
Abaqeqeshi basePadawan babeza kukhula okanye batheke i-Padawan ubuqili kunye nokuqeqesha kwindawo yokufundela kunye nabafundi abaninzi kunye nootitshala. Emva kokufikelela kwiminyaka ethile, kwaye ufundela kwiJedi Knight okanye iJedi Master ukuqala ukuqeqeshwa komnye, abafundi basePadawan baya kwiindawo zokunyusa ukuqinisa izakhono zabo kwiindlela zeMbutho. Ubunzima be-Padawan buya kukhishwa kunye ne-lightaber xa umntu ephakanyiswa kwisikhundla sika Knight. Kaninzi "
Clemens Bilan / Getty Izithombe
IJedi Knight igqibile ukuqeqeshwa njengePadawan kwaye idlulisa i-Jedi Trials, okanye ifaniswe ngokufanayo ukuba unelungelo lokuba ngu Knight.
Uninzi lweJedi yi-Knights kwaye lihlala ngoko ubomi babo bonke. IJedi Knights ikhonza i-Jedi Order ngokuya kwimisebenzi kunye nokuqeqesha abafundi abatsha kwi-Knighthood. Ngokungafani neenxalenye zePadawan kunye ne-Youngling, isikhundla seK Knight sigcina igama kunye nencazelo kuyo yonke imbali ye-Jedi Order.
Tristan Fewings / Getty Izithombe
I-Jedi Master iyona nqanaba elihle kakhulu eliseburhulumenteni kwi-Jedi Order. Inikwe iJedi enezakhono emva kokuphumelela okukhulu njengeJedi Knight, njengokuqeqesha abaningana abaqeqeshiweyo ukuba benze umsebenzi omkhulu kwiRiphabhulikhi.
Kugcinwe kulabo abonisa ukuzinikela okukhethekileyo, ubuchule kunye nokulinganisela kwiindlela zeMpi (kwaye zihlala zilwa), kuphela abo baphethe le nqanaba kunye nesihloko bangahlala kwiBhunga eliPhezulu leJedi okanye nayiphi na enye ibhunga.
Ngenxa yokuba isihloko seNkosi sasinohloniphekile, ezinye iJedi Knights - ngokukodwa kwi-Order ye-Jedi yokuqala-zazibiza ngokwazo iJedi Masters. Oku kwadimazeka, njengobulumko kwiMandla, kungekhona impumelelo kwimfazwe kuyimfuneko ukuba abe yiJedi Master. Kaninzi "
IJedi kumasebe eNkonzo ye-Corps, njenge-Corps yezoLimo, ngokubanzi ngabaqeqeshi beJedi abaphumelelanga olunye lwezilingo zabo. Nangona iJedi Knights okanye i-Masters ingasebenza kunye neNkonzo ye-Service Corps, amaninzi awo malungu ayenayo enye yeeJedi.
Iinkcazo zeSayensi yeFiction
Uthando lukaLuka Skywalker
Iimormoni: iNani loLuntu loMhlaba ngonyaka
Inkulu iPiramidi eGiza
Intetho kunye nokubizwa ngegama lesiJapane elithi "Sabishii"
Ziziphi Ihlathi Lokukhula Kwemdala?
Top Hoodoo Gurus Iingoma zee-80s
KwiNyuvesi yaseJeorgia yeNkundla yeeNkundla